Zegerid Otc : ဘာအတွက်အသုံးပြုရတာလဲ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေရှိလဲ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရောသောက်လို့ရလား။ Hello Sayarwon
Zegerid Otc ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Zegerid OTC ကိုအများဆုံးအသုံးပြုကြတာကတော့
ဒီဆောင်းပါးမှာမဖော်ပြထားတဲ့ အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအတွက်လည်း ဒီဆေးဝါးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကသင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Zegerid Otc ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Zegerid OTCကိုသင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာအသုံးပြုပါ။ ဆေးညွှန်းမှာပါဝင်တဲ့ အချက်အလက်များကိုသေသေချာချာဖတ်ရှုပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ ညွှန်ကြားချက်အားလုံးကိုတိတိကျကျလိုက်နာပါ။
ဒီဆေးဝါးကို အစာချေအက်ဆစ်ဓါတ်ပြယ်ဆေးတွေနဲ့ တွဲမသောက်ခင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
ကယ်လ်ဆီယမ်နဲ့ ဗီတာမင်ဒီဆေးဝါးတွေကို သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာသောက်သုံးပါ
ဒီဆေးဝါးမှာ ဆားဓါတ်ပါဝင်တာကြောင့် အကယ်၍သင်ဟာ ဆားပါဝင်မှုနည်းတဲ့ အစားအသောက်တွေကိုသာရွေးချယ်စားသုံးနေရတယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်သုံးခင် ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလိုZegerid OTC ကို (၃နှစ်အထက်) ရေရှည်အသုံးပြုလာတာနဲ့အမျှ ဗီတာမင် ဘီ ၁၂ ချို့တဲ့မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
ဒီဆေးဝါးကို ရိုးရိုးရေနဲ့သာသောက်သုံးပါ။ အခြားဘယ်အရည်နဲ့မှ တွဲပြီးမသောက်သုံးပါနဲ့
ဆေးတောင့်ကိုချိုးချေခြင်း၊ ဝါးစားခြင်းမလုပ်ဘဲ အတောင့်လိုက် ရေနဲ့မျှောချသောက်သုံးပါ
ဒီဆေးဝါးကို ၁၄ရက်ထက်ပိုပြီး ဆက်တိုက်သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်လာရင် ဒါမှမဟုတ် နောက်ဆုံးသောက်ခဲ့တဲ့အကြိမ်နဲ့ ၄လမကွာခင် ပြန်သောက်ဖို့လိုအပ်လာရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ
ဒီဆေးဝါးဟာ အချို့သောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေတွေကိုကမောက်ကမဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် သင်ဒီဆေးသောက်သုံးနေကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဓါတ်ခွဲပညာရှင်နဲ့ ဆရာဝန်သိအောင် ပြောပြထားပါ
ဆေးအာနိသင်အပြည့်အဝရရှိအောင် Zegerid OTC ကိုမပျက်မကွက်ပုံမှန်သောက်သုံးပါ
ဆေးသောက်သုံးပြီး ရောဂါဝေဒနာသက်သာလာရင်တောင် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးသောက်ရက်နဲ့အကြိမ်ရေပြည့်အောင် အတိအကျလိုက်နာသောက်သုံးပါ
Zegerid Otc ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Zegeridကိုအခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Zegeridကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။Zegeridဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Zegeridကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Zegerid Otc အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
အကယ်၍ သင့်မှာအောက်ဖော်ပြပါ အခြေအနေတစ်ခုခုရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင် ဆေးမသောက်သုံးခင်သင့်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုပြောပြတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Zegerid OTC သို့မဟုတ် အခြားဆေးဝါးများတွင်ပါဝင်သည့် ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်း
သင့်ဆရာဝန်၊ သူနာပြု၊ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်၊ သွားဆရာဝန် စတဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူအားလုံးကိုသင် Zegerid OTC သောက်သုံးနေကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးထားပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ပမာဏကို မြင့်စေနိုင်တဲ့အတွက် သင့်မှာသွေးချိုဆီးချိုရောဂါ ရှိနေခဲ့ရင် ဆေးမသောက်သုံးမီသင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
အရိုးပွရောဂါဖြစ်ဖို့အလားအလာများတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဒီဆေးဝါးကို သတိနဲ့ယှဉ်ပြီးသောက်သုံးသင့်ပါတယ်။ အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ ဆေးလိပ်နဲ့အရက်သေစာသောက်သုံးခြင်း၊ စတီးရွိုက်အများအပြားအသုံးပြုခြင်း၊ အတက်ကျဆေးများသောက်သုံးနေရခြင်း၊ မိသားစုမျိုးရိုးထဲအရိုးပွရောဂါဖြစ်ဖူးခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးသောက်သုံးနေစဉ်ကာလတလျှောက် ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ မျိုချရခက်ခဲခြင်း၊ ကတ္တရာစေးရောင် ဝမ်းမည်းမည်းပျစ်ပျစ်သွားခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း၊ ကော်ဖီအနှစ်ရောင်အန်ခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် ဆေးရုံဆေးခန်းရှိရာသို့ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသပါ။
ဒီဆေးဝါးဟာ အရိုးပွရောဂါရှိသူတွေမှာတင်ပါးဆုံရိုး၊ ကျောရိုးနဲ့ လက်ကောက်ဝတ်ရိုး ကျိုးနိုင်ချေကို မြင့်စေပါတယ်။ ဆေးပမာဏအများအပြားသောက်သုံးရသူတွေ၊ တစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးရေရှည်စွဲသောက်ရသူတွေ၊ အသက် ၅၀ကျော်လူနာတွေမှာ အရိုးကျိုးနိုင်ချေ ပိုများပါတယ်။
ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို ဒီဆေးဝါးမျိုးကို အနည်းဆုံး ၃လဆက်တိုက် သောက်သုံးရတဲ့သူတွေမှာသွေးတွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏကျဆင်းနိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာZegerid OTC ကိုရေရှည်သောက်သုံးနေရရင်ဖြစ်စေ၊ digoxin၊ ဆီးရွှင်ဆေးစတဲ့ ဆေးဝါးမျိုးတွေ သောက်သုံးနေရရင်ဖြစ်စေသင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးလိုအပ်တဲ့သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
Zegerid OTC သောက်သုံးနေရသူတွေမှာ lupus ခေါ် ကိုယ်ခံအားတုန့်ပြန်မှုရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားနိုင်သလိုနဂိုက lupus ရောဂါရှိပြီးသားလူတွေမှာလည်းရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်မှာဒီရောဂါရှိနေရင် Zegerid OTC မသောက်သုံးခင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။ ဆေးသောက်သုံးနေစဉ်အတောအတွင်းပါးနှစ်ဖက် ဒါမှမဟုတ် အခြားခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေမှာအနီကွက်များထင်လာခြင်း၊ အလွယ်တကူနေလောင်တတ်ခြင်း၊ ကြွက်သားနဲ့အဆစ်အမျက်များနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ ခြေလက်များရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့ lupus လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။
ဒီဆေးဝါးကြောင့် အနည်းငယ်သောလူတွေမှာအသက်သေစေလောက်တဲ့အထိ ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ မုန့်ချိုအိတ်၊ အသည်းနဲ့ သွေးဖြူဥရောဂါတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီဆေးဝါးဟာ Clostridium difficile associated diarrhea လို့ခေါ်တဲ့ ပြင်းထန်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့အတွက် ဆေးသောက်သုံးပြီးအစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရည်သွားခြင်း၊ ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် မိမိဘာသာထင်သလိုကုသမနေဘဲ ဆရာဝန်ဆီ အမြန်ဆုံးသွားရောက်ပြသဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က ဒီဆေးဝါးကြောင့် အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အရေပြားပြဿနာတွေ (စတီဗင်ဂျွန်ဆင်ရောဂါစု/ toxic epidermal necrolysis) ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ၎င်းပြဿနာတွေဟာ ကုသလို့မပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အပြင် လူနာရဲ့အသက်ကိုပါ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Zegerid OTC သောက်သုံးပြီးအရေပြားနီရဲခြင်း၊ ရောင်ရမ်းခြင်း၊ အရည်ကြည်ဖုထခြင်း၊ (အဖျားရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိဘဲဖြစ်စေ) အရေခွံကွာခြင်း၊ မျက်စိနီရဲယားယံကျိန်းစပ်ခြင်း၊ ခံတွင်းထဲအနာပေါက်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ လည်ချောင်း၊ နှာခေါင်းနှင့် မျက်စိများရောင်ရမ်းခြင်းစတဲ့လက္ခဏာတွေ ပေါ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူသင့်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဒဏ်ကို အာရှနွယ်ဝင်တွေက ပိုခံစားရလေ့ရှိတဲ့အတွက် သတိနဲ့ယှဉ်ပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Zegerid OTC သောက်သုံးနေစဉ်အတောအတွင်း ကိုယ်ဝန်ရလာခဲ့ရင် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ယူဖို့ အစီအစဉ်ရှိလာခဲ့ရင် ဆေးကြောင့်ရလာနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုချိန်ဆနိုင်အောင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Zegerid Otc ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင် သောက်သုံးလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့် ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက် သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Zegerid Otc ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Zegerid OTCသောက်သုံးပြီးအောက်ဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
သွေးတွင်းမဂ္ဂနီဆီယမ်ပမာဏလျော့နည်းသည့်လက္ခဏာများ – စိတ်အခြေအနေပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ ကတုန်ကယင်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆာလောင်မှုမရှိခြင်း၊ အစာအိမ် ဆိုးဆိုးဝါးဝါးအောင့်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
သွေးတွင်းပိုတက်ဆီယမ်ပမာဏလျော့နည်းသည့်လက္ခဏာများ – ကြွက်သားနာကျင်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မမှန်ခြင်း
ကျောက်ကပ်ထိခိုက်သည့်လက္ခဏာများ – ဆီးမသွားနိုင်ခြင်း၊ သွားနေကျဆီးပမာဏလျော့နည်းခြင်း၊ သွေးထဲဆီးပါခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်အလွန်အမင်း မြင့်တက်ခြင်း
သွေးတွင်းသကြားဓါတ်မြင့်တက်သည့် လက္ခဏာများ – စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ ငိုက်မျဉ်းခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်း၊ ဆာလောင်ခြင်း၊ ဆီးမကြာခဏသွားခြင်း၊ အသားပူနွေးနီမြန်းခြင်း၊ အသက်ရှူမြန်ခြင်း၊ ခံတွင်းမှသစ်သီးနံ့ထွက်ခြင်း
ပိုးဝင်သည့်လက္ခဏာများ – ဖျားနာခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးလည်ချောင်းနာခြင်း၊ နားနာခြင်း၊ ထိပ်ကပ်နာဖြစ်ခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သလိပ်များများထွက်ခြင်း၊ သလိပ်အရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ဆီးသွားလျှင် နာကျင်ခြင်း၊ ခံတွင်းထဲအနာပေါက်ခြင်း၊ အနာမကျက်ခြင်း
မုန့်ချိုအိတ်ထိခိုက်သည့် (မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ရမ်းသည့်) လက္ခဏာများ – ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကျောအောင့်ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း
အသည်းထိခိုက်သည့်လက္ခဏာများ – ဆီးအရောင်ရင့်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ဆာလောင်မှုမရှိခြင်း၊ အစာအိမ်ထိခိုက်ခြင်း၊ အစာအိမ်အောင့်ခြင်း၊ ဝမ်းအရောင်ဖျော့ခြင်း၊ အော့အန်ခြင်း၊ မျက်စိဝါခြင်း၊ အသားဝါခြင်း
ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးထုံသလို၊ ကျင်သလို၊ စပ်ဖျင်းဖျင်းဖြစ်သလိုခံစားရခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Zegerid Otc နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zegerid OTCဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Zegerid OTC နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Zegerid Otc နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Zegerid OTC က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Zegerid Otc နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Zegerid OTCဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Zegerid Otc ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးတွေအတွက် Zegerid Otc ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Zegerid Otc ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Zegerid OTC ကိုဆေးတောင့်ပုံစံနဲ့ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Zegerid OTC ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Zegerid OTC®. https://www.drugs.com/cdi/zegerid-otc.html. Accessed November 16, 2017
Zegerid OTC®. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-154026/zegerid-otc-oral/details. Accessed November 16, 2017